ရှေ့ ကလူကလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ရှေ့ ကလူကလဲ
Posted by သားငယ် on Jan 3, 2012 in Society & Lifestyle |5comments
ရှေ့ ကလူကလဲ..ကောင်းကောင်းမသွားဘူး..နောက်ကလူတွေကလဲ.ကောင်းကောင်း မလိုက်ဘူး
ဒီလိုလူတွေများနေသောမြန်မာပြည်မှာ စည်းကမ်းပိုင်း စနစ်ပိုင်းကို အထူး ပြုပြင်သင့်ဟုထင်မိ
ဒါပေမယ့် စဉ်းစားစရာတွေကလဲ များ ပါတယ်။တစ်ချို့ ကိစ္စတွေမှာ လုပ်ပေးနိုင်ပြီး လုပ်မပေးသေးတာလေးတွေ
က ဘာလို့ လဲ..ဆိုတာ…တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အခုအချိန်မှာ လက်တွေ့ 
လုပ်လို့ ရတဲ့ ကိစ္စတော်တော်များများ ပြီးစီးအောင်လုပ်ပေးဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။
အရင်က ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ လူအင်အားကများနေ အင်အားကကြီးနေလို့ အခုမှာ တကယ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲ
မယ့်လူတွေ ကမတွန်းလှန်နိုင်သေးလို့တဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေရတာလား..
ပြုပြင်မယ်ဆိုရင်လည်း အားလုံးလိုလိုက ပြင်ရမှာတွေချည်းပါဘဲ တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပြီးပြီးရော လုပ်ခဲ့ 
ကြတာတွေ ချည်းဘဲဆိုတော့ ကာ စတိလောက်မြေလှန် သလို လုပ်နေလို့ တော့ ပြောင်းလဲလာမှာ မဟုတ်ဘဲ
တကယ်ကို နိုက်နိုက်ချွတ်ချွတ် လိုက်လုပ်နိုင်ပါမှ အဆင်ပြေမှာပါ ။
အခု ချိန်မှာက ကောင်းဖို့ တကယ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေက နည်းနေပြီး ဘေးထိုင် ဘုပြောနေတဲ့ သူကများနေ
အချို့ ကလည်းကိုယ်ကျိုးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးတွေရနိုင်မလည်း ဆိုပြီး ချောင်းနေကြ တာဆိုတော့
ရွေပြည်တော် မျှော်တိုင်ဝေး နေရပေါ့..
အဓိက ကတော့ စည်းကမ်းပိုင်းပါဘဲ..ပြီးခဲ့ တာတွေကို ထားခဲ့ လိုက်ပါတော့
မပြောကြတော့ ဘဲ အခုချိန်ကစပြီးပြုပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတဲ့ အချိန်ကို အမြန်ဆုံးရောက်လာမှာပါ။
အပြစ်လုပ်ထားတဲ့ သူတွေက လဲ အလွာအသီးသီးက လူမျိုးအဖုံဖုံပါဘဲ . .
သူကောင်းလားဆိုတော့ မကောင်းဘူး ငါရောကောင်းလားဆိုတော့ ငါလဲမကောင်းခဲ့ မိဘူး..အများကိုပြောတာပါ။
ကောင်းတဲ့ သူကတော့ အထူးနည်းပါးလို့ အဆိုးတွေချည်းများနေတာပါ…
လမ်းဘေးမှာဈေးရောင်းတဲ့သူကအစ အကြီးဆုံး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအဆုံး အားလုံး က ကိုယ့်အတွက်ဆိုတဲ့ 
ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို ကြည့်ကြတာ များတယ် . ဒါကတော့ လူတွေရဲ့ အတ္တဘဲ ဆိုတော့ 
ဒါပေမယ့်သတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့ အခါကြတော့ဘောင်တွေကျော်ကုန်အောင် အခွင့်အရေးတွေယူ ကုန်ကြရော..
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင် ပြိးရော ဆိုတဲ့အဆင့်ကို ရောက်ကုန်ကြ တာဘဲ.
လမ်းဘေးမှာ ဈေးရောင်းတဲ့ ဈေးသည်ကလည်း ဈေးကိုမတန်တဆ အော်ရောင်းတာဘဲ အချဉ် မိမလားလို့ 
လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကလည်း မတရား ခိုးထုတ် ခိုးသွင်း လုပ်ကြတာဘဲ..
မတရားတာ တရားတာထက် ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လောက်ကျန်မယ်
ဘယ်လိုအတိုင်းအတာမျိုးထိ လုပ်မယ်ဆိုတာ မရှိတော့ ဘူး အတောမသတ်တဲ့ လောဘနောက် ကို လိုက်ကြ
တော့ တာဘဲ..အားလုံးကို တန်းတူသတ်မှတ်ချက်ပေးမယ် အဲ့စည်းကမ်းကို ဘယ်သူကမှ ကျော်လွန်လို့ မရနိုင်
ဘူးဆိုရင်..အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာဘဲ..အဲ့လိုသတ်မှတ်စည်းကမ်းကို မထုတ်ပြန်တာက ..ဘာလို့ လဲ…
၀န်ထမ်းတွေလစာနဲ့စားသောက်နေထိုင်စရိတ် ကာမိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…
ကျနော် မြင်တာကတော့ လှည့်ကွက်တစ်ခုကို မကျာ်နိုင်သေးပါဘူး ပွင့်လင်း မြင်သာမှု့ လည်း မရှိသေးပါဘူး.
နောက်ကွယ်က မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေ အများကြီး ကို ဖုံးကွယ်ထားပါတယ် ။
ဒိအချိန်မှာ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီး တော့အမြန်ဆုံးအကောင်အထည် ဖော်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေကို
အမြန်ဆုံး ပြုလုပ်သင့်နေပါပြီ..လွတ်တော်ထဲမှာ အဆင့်ဆင့် တင်ပြ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ အချိန်တွေ အများကြီး
ပေးဆပ်ရပါဦးမယ်..ဗိုက်အရမ်းစာနေတဲ့အချိန်မှာ ထမင်း ဟင်းပွဲ ကြီးတစ်ခုကို ပြင်ဆင်ပြီးမှ စားမယ်ဆိုပြီး
အခုမှ စပြီး ဆန်စဆေးပါမယ်..ပြီးရင် ဟင်းတွေချက်ပြုတ် ပါဦးမယ် ဒါပြိးရင် ခမ်းခမ်းနားနားပြင်ဆင်ပါဦးမယ်
ဆိုပြီး ကြေ ငြာ စာတမ်းတွေဖတ်ပြ နေလို့ ကတော့ ကျနော့်အတွက်တော့ အဆင်မပြေသေးပါဘူး..
လောလောဆယ်မှာ ခဏတာ တင်းတိမ်အောင်တော့တစ်ခုခုကို အမြန်ဆုံးဖြည့်တင်းသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ မှ တခမ်းတနား ပြင်ဆင်ပြီး ကောင်းကောင်းစားဖို့ လုပ်ပါမယ်…
ဒါဆို အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ။
လူတွေ အများကြီးနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားလို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်တယ် ဆိုပေမယ့်ံလူသားတိုင်းအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်
ကတော့ရှိပါတယ် လူတိုင်း စားဖို့နေဖို့ ပညာသင်ကြားဖို့နဲ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်
တွေကိုတော့အမြန်ဆုံး ဖြည့်စည်း ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်…ဒါတွေပြီးမှ ခေတ်မှီ ဖွံဖြိုး တိုးတတ်သော နိုင်ငံတော်သစ်
လူအများစုက အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်တဲ့ဝင်ငွေ အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်ရပါမယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်တုန်းက အခြေခံ လစာက အနိမ့် ဆုံး ၀န်ထမ်း ကို 450 ဒေါ်လာပေးပါတယ်။
ထမင်း တစ်လ လပေးစားရင် ဒေါ်လာ 100 ကျပါတယ် ။ ကျန်းမာရေးအတွက် နေထိုင်ရေးအတွက် ကုပ္မဏီ က စီစဉ်
ပေးပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ဗာဟီရ အသုံးစရိတ် ကို 100 သုံးမယ်ထား ကိုယ့်အတွက် နောင်ရေး 250 စုနိုင်ပါတယ် ။
အိုဗာတိုင်ဆင်းလို့ရမယ့် ပိုက်ဆံက လစာထက်များပါသေးတယ် ။ဒါဟာ တကယ် အလုပ်လုပ်မယ့်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ် ။
ကျနော်တို့ ဆီမှာ ကျပြန်တော့ အခြေခံလစာ က 30000 လား 45000 လား 50000 လား တစ်ခုခုပါဘဲ..ဒီထက်နည်းပါး
တဲ့ လစာတွေရှိပါသေးတယ် ။ 10000 လောက်ရတဲ့လဖက်ရည်ဆိုင်က ၀န်ထမ်းလေးတွေ. ဆိုင်အကူဝန်ထမ်းလေးတွေ
အများကြီးရှိပါသေးတယ်..စားဖို့ ကျပြန်တော့ ထမင်းတနပ်ကို အညံဆုံး 500 တော့ အောက်ထစ်ပေးရမှာပါ ။
တစ်နေ့ ကို 1000 နဲ့ တစ်လ ကို 30000 ဆိုတော့ တစ်ခြား ဘာမှကို အသုံးမကျန်တော့ ပါဘူး။
အိမ်မှာလူပိုများများ ရှိရင် တော့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ သူကတော့ မချောင်အောင်ထမ်းရ ပါတော့ တယ် ။
အောက်ဆိုက် ကြားပေါက် နောက်ကို လိုက်ရပါတယ် ။ အဆင်မပြေလို့ ပါ ။
တစ်ချို့ ကြပြန်တော့ အဆင်ပြေနေရဲ့ သားနဲ့ လဲ အချောင်လိုချင်ကြပြန်ပါတယ် ။
အခြေခံ ၀န်ထမ်းလစာတိုးမယ် အသံလေးထွက်လာယုံ ရှိသေး ဆန်ဈေးတတ်ပြီ ။ ဆီးဈေးတတ်ပြီ။
ဒါတွေကို ဘယ်လို ထိမ်းချုပ်လို့ ရနိုင်မလဲ..ကုန်သည်တွေကလည်း မတရား လောဘတွေနဲ့ ပိုလိုချင်ကြပြန်ပါတယ်။
ရှင်းပါတယ် ဥပဒေ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိစေရ လို့ ဆိုပါတယ် ။
ဥပဒေ ထုတ်ပါ အမိန့် ကြေငြာပါ.. ၀န်ထမ်းတွေကို အခြေခံလစာ ဘယ်လောက်ပေးရမယ် ။
စက်ရုံတစ်ရုံမှာ ၀န်ထမ်းအင်အား ဘယ်လောက်ထားရမယ် …ထုတ်ကုန်ပေါ်မှုတည်ရပါမယ်။ လစာတိုးပေးလိုက်ရလို့ 
ဆိုပြီး ၀န်ထမ်းအင်အား လျှော့ ချတာကတစ်မျိုး နည်းပါးတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို မတရားစေခိုင်းတာက တစ်ဖုံ လုပ်တတ်
လွန်းလို့ …အလုပ်ချိန်ကို သတ်မှတ်ရပါမယ် ။ ဒါမှ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အိုဗာတိုင် ဆိုလည်း အိုဗာတိုင်ပေါ့ ။
အခြေခံစားသောက်ကုန်ကို ဈေးနုန်းသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်. ထုတ်ကုန်နည်းလို့ ဈေးတတ်တာ ဆိုရင် တိုးမြင့်ထုတ်နိုင်အောင်
လို့နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံပေးရပါမယ် ။ ထုတ်ကုန်က မနည်းပါဘူး နိုင်ငံခြားကို မတရားပို့ နေတော့ ဈေးနန်းကွာဟ ကုန်တာပါ။
နာဂစ်ဖြစ်လို့ သူများက ဆန်လာလှုတယ် ဒီကကုန်သည်တွေက နိုင်ငံခြားပြန်ပို့ တောင်ရောင်းနေရလောက်အောင် ဒီနိင်ငံမှာ ကလည်း
လောဘဇော တွေတိုက်နေကြတာ လူကနည်းမှ မနည်းတာကို…အခုလည်း ဆန်တွေ နိုင်ငံခြား ပို့ တာပိတ်လိုက်သေးတယ်။
တောင်သူတွေက အိတ်စပို့ မရှိတော့ ဈေးလျှော့ ရောင်းရလို့ တွက်ခြေမကိုက်ပါဘူး. ကုန်သည်တွေက အောက်ဈေးနဲ့
ရသလောက် ၀ယ်ပါတယ်။ ဟော အခု ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြန်ပြီ ဗျာ အောက်ဈေးနဲ့ ဝယ်တယ် အထက်ဈေးနဲ့ ပြန်ရောင်းတယ် ။
ဒါက လုပ်စားတာလား ဘာလားတော့လုပ်တဲ့ သူတွေဘဲသိမှာဘဲ..ကျနော်က တော့ မသိပါဘူး .ကုန်သည်တွေ ကံအရမ်းကောင်းနေတာလည်း
ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ကားတွေသွင်းလာပါတယ်. ဒေါ်လာ 2000 နဲ့3000 ကြားလောက်မှာ ဘဲတန်မယ့်ကားတွေကို ဒီက လူတွေက ဈေးအမြင့်တွေနဲ့ 
၀ယ်ရပါတယ် ။ ၀ယ်ခွင့်ပါမစ်တွေ သတ်မှတ်ထားပါတယ် အဆင့်မရှိရင် မ၀ယ်နိုင်ပါဘူး ဒါဟာ အခြေခံလူတန်းစားတွေထက် အဆင့်မြင့်လူတွေ
အတွက် ဖန်တီးပေးသလိုများ ဖြစ်နေမလား…
မနက်က မြို့ ထဲကိုသွားတော့124 အထူး ဘတ်နဲ့ လာပါတယ် ယာဉ်စီးခ 300 တောင်းလို့ ပေးလိုက်ရပါတယ်။ တင်လိုက်တဲ့ ခရီးသည် အထူးကားမဟုတ်ပါဘူး
မထူးကားပါဘဲ .. ကားပေါ်မှာ လူ 70 ကျော်လောက်ပါမယ် ထင်ပါတယ် ကတောင်မကလောက်ပါဘူး ။ စွတ်မောင်းမယ် စွတ်ကျော်မယ် ကားမောင်းတဲ့ သူကလည်း
နေ့ တွက်ကိုက်အောင်တင်ပါတယ် လူများများပိုရအောင် မြန်မြန်ကျော်မောင်းပါတယ်။ အဆင်မပြေတာကတော့ ခရီးသွားပြည်သူတွေပါဘဲ
ယာဉ်မောင်းတွေကို လစာနဲ့ မောင်းခိုင်း ခရီးသည် ပိုတင်တယ်ဆိုရင် အရေးယူ သတ်မှတ်မိုင်နှန်း သတ်မှတ် ငွေကြေး သတ်မှတ် အချိန် နဲ့ မောင်းခိုင်း
မယ်ဆိုရင် ခရီးသည်တွေရဲ့ အလုပ်မသွားခင်နဲ့အလုပ်က မောပန်းပြိးပြန်လာတဲ့ အချိန်လေးမှာ ကားပေါ်မှာခဏလောက်တော့ အနားယူခွင့်ရပါတယ် ။ယာဉ်တိုက်မှု့ 
ကြောင့် ဖြစ်ပွားတဲ့ ဘေးတွေလည်းကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ခရီးသည်ပို့ ဆောင်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက လမ်းမှာ ယာဉ်စစ်တွေ ခန့် ထားပါတယ် သူကလည်း ယာဉ်မောင်းတွေကို ဘယ်ကားက ဘယ်အချိန်က ဖြတ်သွားတယ် မှီသေးတယ် လိုက်ကျော်ခိုင်း ကားသမားဆီက တစ်စီးကို 200…အော်…သူ့ ကို ပေးထားတဲ့ တာဝန်က ဘာလည်းဆိုတာ မေ့ သွားပြီ..သူလည်း အိမ်မှာအဆင်ပြေအောင် လုပ်ရသေးတာကိုး ကြားထဲက ခံရတာကတော့ ကျနော်တို့ လိုလူတွေပါဘဲ..အဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့ပြေပါတယ် ။
ဘယ်လိုပြေသလဲ လို့ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့လူက ရေထဲမှာ ရေက နှာခေါင်း မြုတ်တော့မယ် ခြေဖျား ထောက်ထားရတယ် အဲ့လိုလေ..ထောက်ထားတဲ့ ခြေဖျားကို မချရဲဘူး
အသက်ရူရပ်သွားမယ်.. အဲ့လိုနေ နေရတာ..သဘောက တော့ အသက်ရှင်ဖို့ အတွက် ပင်ပန်းကြီးစွာ ရုန်းကန်နေရတယ် ကျန်တဲ့ဝတ်ဖို့ စားဖို့ နေဖို့ ကို မတွေးနိုင်ဘူး
နှာခေါင်းလေး ရေထဲမြုတ်မသွားအောင် ခြေဖျားမနည်းအားတင်းပြိး ထောက်ထားရတယ် ညောင်းတော့ ညောင်းတာပေါ့ ဒါပေမယ့်လည်း မသေဖို့ ကတော့ လုပ်နေရဦးမှာဘဲ ။
လူအများနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ လူအများအဆင်ပြေနိုင်မယ့် စည်းကမ်းတွေကို အမြန်ဆုံး နဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကောင်းအောင် ရွေးချယ်ပြီး လတ်တလော အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးသင့်
ပါတယ် .စည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့ သူတွေကိုလည်း အရေးယူနိင်အောင် စည်းကမ်း ထိမ်းသိမ်းရေးမှုးတွေ နဲ့သေသေချာချာလုပ်ပေးသင့်ပါတယ် ။ တကယ်ကို စေတနာရှိတယ် အားလုံးကို
အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေစေချင်တယ် ဆိုရင်ပေါ့ ။ နေရာတိုင်း မှာ ရန်များလှပါတယ် လည်သူစား စတမ်း တကယ့်ကို အခြေအနေ ဆိုးကြီးပါ.. မမှားလိုက်နဲ့ပြင်ပေးမယ့်သူမရှိဘူး ၀ိုင်းနွာကြမယ့်
သူတွေချည်းပါဘဲ ။ ဈေးမသိဘဲ ဈေးဝယ်ကြည့်ပါ ပစ္စည်းတစ်မျိုး ထဲ တစားတည်း က နေရာပေါင်းစုံမှာ ဈေးနှန်းပေါင်း စုံနဲ့ပါ..မ၀ယ်တတ်ရင်တော့ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါဘူး ။
တခြား ကိစ္စတွေလည်း အများကြီးပါဘဲ..သိသိလျှက်နဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင် နေကြတဲ့သူတွေက ပိုသိပါတယ်..ဘာတွေလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို
လောင်းကစားသမားကလည်း လိုင်းကြေးပေးပြီးလုပ်နေတုန်းပါဘဲ ..ကေတီဗွီ …လည်းရှိနေတာဘဲ…မာဆက် အများကြီးဘဲ ခဏဘဲ..ရဲတွေကလည်း မသိဘူးလားဆိုတော့ သိတာဘဲ..
လိုင်းကြေးလေးရနေတော့ လည်း မျက်စိမှိတ်ထားတာဘဲ..ကျနော် တို့ နားက မာဆက်တွေ ဆိုရင်ဖွင့်ထားတာ ၇ နှစ်လောက်ရှိနေပေါ့..ကလေးက အစ သိတယ် မာဆက်နေရာကို နှစ်လုံးဒိုင်
ဘောလုံးဒိုင် ..ဒါတွေလည်း အများကြီးဘဲ..ကျနော်လူမှန်းသိတတ်စထဲက ဖွင့်နေတဲ့ ဒိုင်တွေအ ခုထိဖွင့်နေတုန်းဘဲ..ညနေဆိုရင် ရဲကဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ လာလာတောင်းတောင်းသွားတာ
လဖက်ရည်ဆိုင် မှာထိုင်နေတဲ့ ကျနော်က တွေ့ နေတာ ရိုးနေပေါ့….ကျနော်လည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး ဘာမှလည်းမလုပ်နိုင် ပါဘူး ..စိတ်ထဲမှာရှိနေတာလေးတွေ လျှောက်ရေးမိတာပါ။
စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေဘယ်လို ခံစားနေရမှန်းမသိဘူး ဗျာ တစ်ခုခုလိုနေသလို ဖြစ်နေတာနဲ့ရေးလိုက်မိတာပါ..အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ် အမှားတွေများလျှင်ခွင့်လွတ်ပေးကြပါလို့ ……
ကျွန်မ လဲ သိပ် နားလည်သူ မဟုတ်တော့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမယ် မသိပေမဲ့ ဒီလို ပြသနာလေးတွေ ရှိကြောင်း ပြောပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သားငယ်ရေ။
ဒီလို ရေးတော့ အနည်းဆုံး ပြသနာ ကို သိသွားတာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ဖြေးဖြေးချင်း အဖြေရှာလို့ရသွားမှာပါ။
စိတ်ရှည်ဖို့ရယ်၊ စည်းလုံးဖို့ရယ်၊ တာဝန်ယူတတ်ကြဖို့ရယ် …… စသဖြင့် တော့လိုတယ် ထင်တာပါဘဲ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြဿနာတော်တော်များများက..နိုင်ငံရေး စံနစ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဖူးလို့.. သုံးသတ်မိတယ်..။
စိတ်ဓါတ်ရေးရာနဲ့.. ရှေးစွန်းစွဲအယူတွေ.. အရင်လျှော့နည်းပပျောက်အောင် လုပ်ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။
ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေ..မင်းလုပ်ကြီးစိုးနေတဲ့တိုင်းပြည်ဟာ.. မတိုးတက်ပါဘူး..။ တိုးတက်လို့ကို မရပါဘူး..။
လူလူချင်းတန်းတူညီမျှမှုကလည်း အကြီးအကျယ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကို ဖေါက်ဖျက်ခံနေရတာပါ..။
လူလူချင်းတန်းတူညီမျှမှုကိုလည်း.. လူတွေက သိတောင်မသိတော့နိုင်လောက်အောင်.. ရိုက်သွင်းခံထားရတယ်ပဲ.. မြင်မိပါတယ်..။
နိုင်ငံရေးစံနစ်မှာ.. အလုပ်လုပ်သူတွေနဲ့..မလုပ်သူတွေ.. ခွဲခွဲခြားခြားဖြစ်သွားအောင်.. အမြတ်ခွန်ဥပဒေတွေကို.. စံနစ်တကျပြဌာန်းပြီး.. ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို.. အေ၇းယူဆောင်ရွက်သင့်တယ်မြင်မိပါတယ်..။
“ကျနော် မြင်တာကတော့ လှည့်ကွက်တစ်ခုကို မကျာ်နိုင်သေးပါဘူး ပွင့်လင်း မြင်သာမှု့ လည်း မရှိသေးပါဘူး.
နောက်ကွယ်က မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေ အများကြီး ကို ဖုံးကွယ်ထားပါတယ် ။”
သီးနှစ်သီးရဲ့မျှော်စင်ကျွန်း အခွေ ကြည့်ပြီးကြပြီလား၊ မကြည့်ရသေးတဲ့ရွာသားတွေ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကြပါ။ အိမ်ဆောက်တဲ့ အကြောင်းလေးကိုပေါ့။
“တစ်နေ့ ကို 1000 နဲ့ တစ်လ ကို 30000 ဆိုတော့ တစ်ခြား ဘာမှကို အသုံးမကျန်တော့ ပါဘူး။
အောက်ဆိုက် ကြားပေါက် နောက်ကို လိုက်ရပါတယ် ။”
သူတို့လိုအဆင့်ရှိသူတွေကများပြီး လူထုအများနဲ့ဆက်ဆံရတော့ လူပိုသိပါတယ်။ လူအများရဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်နေပါတယ်။အထက်အောက်ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာလည်း အဆင်မပြေရင် ၊ ရှာမပေးနိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ပိုထိလွယ်ခိုက်လွယ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအပြောခံရပါတယ်၊
“တစ်ချို့ ကြပြန်တော့ အဆင်ပြေနေရဲ့ သားနဲ့ လဲ အချောင်လိုချင်ကြပြန်ပါတယ် ။”
ကာရာ၊မာဆတ်သွားဖို့ ရှာတဲ့အဆင့်တွေပေါ့။ အဲသူတွေကတော့ ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိ ကဇက်တက်အော့ဖစ်ဆာလောက် အဆင့်တွေပေါ့။ ဒါတောင် အကုန်လုံးမဟုတ်သေးပါဘူး၊ အချို့ဌာန အရာရှိအဆင့်တွေ ရပ်တည်နိုင်ဖို့တောင်အနိုင်နိုင် တောင်းရမ်းစားနေရတာ။
မယက ဥက္ကဌအဆင့်လောက်ဆိုရင်တော့ တိုက်ဆောက် ကားစီးသွားနိုင်ပါပြီ။
“ဥပဒေ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိစေရ လို့ ဆိုပါတယ် ။
ကျားကြီးတော့ခြေရာကြီး၊ ပါးစပ်လည်းကြီးပါတယ်၊သူတို့တွေကြတော့ မိသားစုလိုက်ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်နိုင်သွားပါပြီ။ သူတို့ ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု ၅% လောက်စီကိုပဲ ၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေမှာ ချသုံးလိုက်စမ်းဘာ။ ဆင်းရဲမှု ပပျောက်ရေးတဲ့………………..
ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် လခလေး သုံးသောင်းလောက်နဲ့ မိသားစု = ?
သူတို့ လူမမယ်လေးတွေ ငွေရမဲ့ အလုပ်မှန်သမျှ အကုန်လုပ်ရတော့မှာ၊
ခေတ်အခြေအနေမပြောင်းလဲသရွေ့ တော့ ခက်နေအုံးမ.ှာပါ။တကယ်တော့ မူဝါဒတွေထက် လူကောင်းဖို့ လိုမယ်